Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)
Manohy ny ezaka ho fanatanterahana ny velirano faha efatry ny Filohan’ny Repoblika ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa : "FAMPIANARANA AMBONY HOAN’NY REHETRA »".
Isany mahazo anjara amin’izany ny eo anivon’ny foloalindahy.
Io no nivoitra nandritra ny fifanaovan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministera roa tonta natao androany teny amin’ny foiben’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena Ampahibe.
Fiaraha-miasa vaovao iarahana @ ireo oniversite telo, dia Antananarivo, Fianarantsoa ary Mahajanga.
Miompana indrindra @ fanomezana fanofanana sy fampianarana ny mpianatra ho manam-boninahitra eo ambany fiahian’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena izany fiaraha-miasa izany .
Ireto avy ireo sekoly sy sampam-pampianarana voakasik’io fiaraha-miasa io :
Sampana fitsaboana ao amin’ ny oniversiten’Antananarivo
“Institut d’odonto stomatologie tropicale de Madagascar” ao amin’ny oniversite Mahajanga
Sekoly politekinika ao amin’ny Oniversite Antananarivo
Sekoly mpampiofana mpampianatra ao amin’ny Antananarivo(ENS )
Sekoly fampianarana hay kajy mirindra (ENI) ao Fianarantsoa.
Natao izao fiaraha-miasa izao mba hanamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao eo amin’ireo mpianatra ho manam-boninahitra ka hahatonga azy ireo ho matihanina tanteraka eo amin’ny asa ataony rahatrizay.
Nanambara ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa ny Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice tamin’ny lahateny nataony fa isan’ny mpirotsaka an-tsehatra mandrakariva ny foloalindahy eo amin’ny fanatonana ny vahoaka raha tsy hiresaka afa-tsy ny fandraisany anjara tamin’ny ady atao amin’ny areti-mifindra samihafa nisy teto amintsika (pesta,tazo mahery,colerà,COVID-19 sns…), noho izany dia ilain’izy ireo ny fahaiza-manao sy ny fanitaram-pahalalana ahafahany miatrika ny adidiny.
Nanao sonia ity fifanaraham-piaraha-miasa ity ny Général de division RAMASY RAZAFINDRATOVO Heritiana, mpandrindra ankapobeny ny tetikasa eo anivon’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena, sy ireo filohan’ny oniversite telo, RAVELOMANANA Mamy (Antananarivo), RAFAMANTANANTSOA Fontaine (Fianarantsoa) ary RASOAMANANJARA Angelphine (Mahajanga).
Natao teo ambany fiahian’ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice sy ny Minisitry Fiarovam-pirenena,ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard ny lanonana.
Ministeran’ny Fiarovam-pirenena AmpahibeMinisteran’ny Fiarovam-pirenena Ampahibe